Ọdịdị nke Ọnwa .....
Ọdịdị nke Ọnwa ..... 2 afọ 11 ọnwa gara aga #696
Otu nbudata ọhụụ kachasị ọhụrụ, Craters of the Moon emechaala nke ọma. M bi na Idaho, naanị 100 ma ọ bụ karịa kilomita site na ya ..... EGO!!!! Ọ bụrụ na ị bụ onye JUMBO ma nwee ohere na draịvụ ike gị, nwalee ya. Ọ bara ezigbo uru. Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ JUMBO, ọ nwere ike iwe ezigbo oge ọ bụla. Mana, ihe niile a bụ na ọ dị mma.